कसरी बुनना गर्न सिक्न? यो प्रश्न झन् भर्खर नयाँ शौक सिक्न चाहन्छन् नगर्ने जवान बालिका सोधेका छ, तर पनि यसको परिणाम प्रयोग गर्न - आफ्नै हातले बनाएको विशेष वस्तुहरू बोक्नु।
बुनाई - फेयर सेक्स को पुरानो व्यवसायहरुको को एक। प्राचीन समयमा, हरेक केटी, यो के गर्न सक्षम हुनुपर्छ अन्यथा यो धेरै यसको आफ्नै उत्पादन निट flaunted गर्नेहरूलाई प्रेमिकाहरुलाई संग तुलना, मानिसहरूको नजरमा हराएको छ। दुर्भाग्यवश, हामी अक्सर कारखाना विधि बनाएको कुरा किन्न। निस्सन्देह, तिनीहरूले थप सुन्दर र स्टाइलिश लाग्न सक्छ, तर ठीक नै जर्सी केटीले आत्म-सम्मान गर्न एक झटका कम्तिमा अर्को केही प्रेमिकाहरुलाई जानेछ। तिनीहरूले एक प्रतिलिपि हुनेछ - बुनना र अरूले ईर्ष्या गरे गरिने एक कृति सिर्जना गर्न, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण सिक्न - यहाँ उत्पादन स्पष्ट छ। यो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री हरेक मानिस कदर हुनेछ।
त्यसैले, कसरी बुनना गर्न सिक्न? यो गतिविधि को मूल कुराहरू एकदम सरल छ। सुरू गर्न आफ्नो सीप पूरा गर्न सरल उत्पादनहरु मा प्रशिक्षण, र त्यसपछि थप जटिल कुराहरू अगाडि बढ्न छ। कुनै पनि अवस्थामा, उत्पादन प्राप्त गरिने छैन भने, यो भंग र फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो मात्र आफ्नो काम मा बोल्ड तत्व बनाउन, जटिल ढाँचाको बनाउन क्षमता आउँछ किनभने यो व्यवसाय मा अनुभव, धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं कसरी बुनना सिक्न अघि, विशेष पत्रिका पाउन सकिन्छ भन्ने सल्लाह थाह गर्न आवश्यक छ। लग योजनाहरु अनौठो विवरण भने दुखी छैन। केही उत्पादनहरु यो व्यवसाय मा एक निश्चित अनुभव आवश्यक, त्यसैले जटिल जस्तो लाग्न सक्छ। हुन छैन पहिलो कदम लिन डर - त्यहाँ जो बुनना सिक्न कसरी विस्तार वर्णन शुरुआती लागि डिजाइन पाठ को धेरै, छन्।
पहिलो, प्रयोग गर्नु सुई र यार्न को नियम थाह प्राप्त गरौं। आवश्यकता को प्रारम्भिक चरणको लागि कुनै पनि उत्पादन को आधार हो जो सरल लूपहरूको, रंगरुट गर्न। हात सबैभन्दा तनावमुक्त, को कोहनी मा झुकेको राख्न र आफूलाई एउटा सानो खींच गर्न आवश्यक छ। यस्तो मुद्रा तपाईं धेरै घण्टा प्रेम सबैभन्दा सहज र गरिरहेको अनुमति दिन्छ कुराहरू हुनेछ। यार्न गर्न सूत्रको टेङ्गल भ्रमित छ छैन वा सर्वश्रेष्ठ एक खोक्रो गत्ता बक्स, जो प्रत्येक अन्य अर्को राखिएको गर्न सकिन्छ मा डूबा hank। आफ्नो बायाँ हातमा तय गर्ने मुद्दा, प्रयोग गरिने, को अन्त। थ्रेड त्यसपछि twists ठूलो वरिपरि सूचकांक औंला मा प्रदर्शन र त्यसपछि। यदि औंलाहरु, लुपमा लाभ पतला। भित्र यो पाश, हामी spokes प्रविष्ट गर्नुहोस्, अप संग मुद्दा उठयो सूचकांक औंला र वरिपरि ठूलो लुपमा आकर्षित। त्यसै गरी provyazyvayutsya सबै लूपहरूको अगाडि पङ्क्ति छन्। एक पाश गठन हुन्छ, यसलाई आफ्नो औंला हटाइएको र spokes कस छ। दोस्रो पङ्क्ति पहिलो पास हुनेछ किनभने एकै समयमा, कस धेरै आवश्यक छैन। त्यसैले, पहिलो पाश सजिलै सुई प्रबन्ध गर्नुपर्छ। पहिलो श्रृंखला जस्तै तरिकामा, खत्म अन्तिम। तपाईं पनि सरल तत्व कसरी बुनना सिक्न अघि, तपाईं आवश्यक लूपहरूको पङ्क्ति कति जान्नु आवश्यक - यो जानकारी बुनाई उत्पादनहरु को योजना मा सामान्यतया छ। गठन संयन्त्र सर्वश्रेष्ठ बुनाई मा एक भिडियो पाठ्यक्रम देख्न छन् - टाँका पंक्तिहरूको अगाडि र पछाडि दुवै बाट गर्न सकिन्छ। अर्डर एक "रबर ब्याण्ड" प्राप्त गर्न (उदाहरणका लागि, घाँटी र स्वेटर को आस्तीन), लुपमा alternated गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया दुई backstitches र दुई एकांतर अनुहार बनाउन। विस्तार गर्न, वा लुपमा थप्न आवश्यक बढ्छ गर्न - उत्पादन साँघुरो गर्न, र यदि आवश्यक। घटाउ दुई लूपहरूको द्वारा कब्जा गर्न सकिँदैन गर्दा र थप - दुई stratified STRAND, र स्वतन्त्र पाश बुना छन्।
बुनाई - एक अद्भुत महिला शौक। यो उपयुक्त assiduous natures, जुन एक शान्त छुट्टी जस्तै साँझ छ। तपाईं बुनना कसरी सिक्न थाहा छैन भने, दुखी छैन। तपाईं हरेक शहर मा उपस्थित छन् जो क्लब, धेरै मास्टर कक्षाहरू चिसो जाडो सांझ लाग्न सक्छ।
आफ्नै हातमा हावा Kusudama ओरिगेमी पुतली
परम्परागत Dymkovo खेलौना: कसरी आफ्नो हातमा माटो बाहिर बनाउने?
Sutazhnye सजावट: प्रकाश ताजा, स्टाइलिश
कजान: काला लेक। Tatarstan को राजधानी मा के हेर्न?
Adrianople संसारमा। Adrianople शान्ति सन्धि को निष्कर्ष
Herbalife अस्पष्टता समीक्षा
होटल साओ Domingos2* (भारत, गोवा): फोटो र समीक्षा
नेटवर्क topologies: लाभ र बेफाइदा